ဇာတ်ကောင်တွေကို စီးမြောရင်း လက်တွေ့ဘဝထဲ ပြန်ဝင်လာဖို့ခက်နေပြီဆိုတဲ့ ခင်သဇင် – အနုပညာရပ်ဝန်း
ဇာတ်ကောင်တွေကို စီးမြောရင်း လက်တွေ့ဘဝထဲ ပြန်ဝင်လာဖို့ခက်နေပြီဆိုတဲ့ ခင်သဇင်
သရုပ်ဆောင်မင်းသမီးချောလေး ခင်သဇင်ကတော့ ပီပြင်တဲ့သရုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ ပရိသတ်ရင်ထဲရောက်ရှိလာသူတစ်ယောက်ပါ။ မကြာသေးခင်က MRTV-4 မှာထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့တဲ့ အချစ်ဖွဲ့လေညှင်း ဇာတ်လမ်းတွဲမှာဆိုရင်လည်း မိုးကလျာဇာတ်ရုပ်နဲ့ ဗီလိန်အခန်းကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သူပါ။ လေယာဉ်မယ်ဘဝကနေ သရုပ်ဆောင်ဘက်ကူးပြောင်းခဲ့သူဖြစ်ပြီး ဒီနေ့မှာတော့ ခင်သဇင်တစ်ယောက် သရုပ်ဆောင်အလုပ်လုပ်ရင်း တခါတလေလန့်လာမိတဲ့အကြောင်းကို ရင်ဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။
” တခါတလေ သရုပ်ဆောင် အလုပ်ကို လုပ်ရင်း တကယ် လန့်လာတယ်.. ခုနောက်ပိုင်းက သရုပ်ဆောင်ရင် ငိုရင်လည်း မရပ်တော့ဘူး.. ရယ်ရင်လည်း မရပ်တော့ဘူး.. လက်ရှိဘဝ ထဲကို ရုတ်တရက် ပြန်လာဖို့ ခက်နေတယ်… ဒီလို ရှေ့ဆက်သွားရင် ကောင်းတဲ့ ဘက်ရှိသလိုဆိုးတဲ့ ဘက်လည်း ရှိလာနိုင်လို့ လူက ဂေါက်သွားနိုင်မလားပေါ့…. ဇာတ်ကောင်ရဲ့ ဘဝ ကို ဝင်စားတာ မြန်သလောက်… ကိုယ်ဘဝ ထဲ ပြန်ရောက် ဖို့ တော့ တော်တော်ကြာတယ်.. Mood တစ်ခု ဝင်နိုင်ဖို့ နေ့စဉ် လေ့လာ သင်ယူမှုတွေနဲ့ practice တွေ လုပ်ခဲ့တယ်.. တခါတလေ လေ့ကျင့်နေရင်း ကိုယ် အတွေး တစ်ခု ဝင်လာတာက ငါက အစကတည်းက ဂေါက်နေလို့ သရုပ်ဆောင် ဖြစ်သလား..? သရုပ်ဆောင်ရင်း ဂေါက်သွားတာလား သံသယ ဖြစ်လာတယ်… ဘာလို့ဆို… ခုနောက်ပိုင်း ကိုယ်မဟုတ်တဲ့ တခြားလူတစ်ယောက် ပုံစံတွေနဲ့ ပါ အပြင်မှာတကယ် နေလာတယ်… ကိုယ့်စိတ်ကူးထဲက လူပုံစံတွေ… ကိုယ်ရိုက်မယ့် ဇာတ်ကောင် စရိုက်တွေ … ဘေးလူကပါ အဲဒါ လိုက်ပြောပေးပြီး ပါဝင်ပေးနေရင် ကိုယ့်မဟုတ်တဲ့ တခြားလူ ဘဝ ထဲမှာပျော်နေတယ်…
ကိုယ်မဟုတ်တဲ့ တခြားလူ အ ဖြစ်နဲ့ နေရတာ ခင်သဇင် ဘဝ ထက် ပိုရင်ခုန်ဖို့ ကောင်းတယ်…ဒီလိုတွေ ကြားရင် နည်းနည်းတော့ ဆိုက်ကို ဆန်နေပါလိမ့်မယ်..ဒါပေမယ့် လောလောဆယ်တော့ အဲဒါ တကယ်တွေ ဖြစ်နေတာပါ” ဆိုပြီး လတ်တလောခံစားချက်တွေကို မျှဝေခဲ့ပါတယ်။ သရုပ်ဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ ဇာတ်ကောင်စရိုက်အတိုင်း နေထိုင်ကြတဲ့အနုပညာရှင်တွေအကြောင်းကိုတော့ ပရိသတ်တွေလည်း သိကြမှာပါနော်။ ခင်သဇင်ကတော့ သူကိုယ်တိုင်လည်း ဇာတ်ကောင်စရိုက်ထဲစီးမြောဖို့လွယ်သလောက် လက်တွေ့ဘဝကိုပြန်လာဖို့ တော်တော်ခက်ခက်ခဲခဲ ကြိုးစားနေရပြီး လက်ရှိအချိန်မှာ ကိုယ်မဟုတ်တဲ့တခြားသူတစ်ယောက်အဖြစ် နေတာက ပိုတောင်ရင်ခုန်ဖို့ကောင်းနေပါတယ် ဆိုတဲ့အကြောင်း မျှဝေခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်